Hiiraan Archives - Page 2 of 4 - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Hiiraan'
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo Sheegay Inaysan ka Qayb galayn Shirka Jowhar ka Furan (VIDEO)
September 07, 2016 – Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Baledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay kasoo horjeedaan shirka maamulka loogu sameynayo goboladda Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee ay gogoshiiso taalo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Gudoomiye Dabageed ayaa sheegay hadii ay yihiin maamulka Gobolka Hiiraan inaysan …
Banaanbax Looga soo Horjeedo Shirka ka Furmaya Magaalada Jowhar oo Maanta Baledweyne ka Dhacay (Sawirro)
September 04, 2016 – Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax balaaran oo looga soo horjeeday Shirka Maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe oo lagu wado inuu ka furmo magaalada Jowhar. Banaanbaxani ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal qof oo isugu jira odoyaasha dhaqanka, Dhalinyaro, Haween iyo caruur iyagoo …
Wajiga Labaad ee Shirka Maamul u Samaynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo Maanta ka Furmaya Magaalada Jowhar
September 03, 2016 – Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe uu ka furmo shirka maamulka loogu sameynaayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, oo lagu dhawaaqay maalintii arbacada ahayd. Ammaanka Guud ee Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Shabellaha Dhexe ayaa Saaka si weyn loo adkeeyay, iyadoo Wadooyinka Magaalada la dhigay Ciidamo aad …
Shirka Maamul u Samaynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo Maalita Sabtida ka Furmaya Magaalada Jowhar (VIDEO)
August 31, 2016 – Waxaa Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed Cumar Carte uu ku dhawaaqay in maalinta Sabtida ah oo ay taaariikhdu tahay 03 September 2016 uu dib u furmidoono Shirka maamulka loogu suubinayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe. Baaqani ayaa yimid kadib markii R/wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo Wasiirka …
DAAWO: Sawirro Kale ee Xafladdii Caleemo Saarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif (SAWIRRO)
July 25, 2016 – Waxaa maanta magaalada Baladwayne ee Xarunta Gobolka Hiiraan Lagu Caleemo Saaray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, Waxaana xaflada Caleemo saarka ka soo qayb galay Wufuud kala duwan oo ka kala yimid Gobolada dalka Soomaaliya iyo wafuud ka socotay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Xarunta Caleemo saarka lagu qabtay ayaa waxaa laga dhisay Aqal …
Amniga Baladweyne oo aad loo Adkeeyay iyo Xaflada Caleemo Saarka oo Goordhow Bilaabaneysa (SAWIRRO)
July 24, 2016 – Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa maanta isku diyaarineysa in lagu qabto Xaflada caleemo saarka lagu caleemo saarayo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Xafladan ayaa waxaa loo diyaariyay goob qurux badan oo amnigeedu aad loo adkeeyay, halkaasi oo laga dhisay aqal Soomaali, waxaana xafladani caleemosaarka lagu casuumay dad aad u fara …
Baladweyne oo Dhawaan Looga Dhawaaqi Doono Maamul Ka Madax Banaan Dowladda Federaalka (VIDEO)
July 20, 2016 – Odoyaasha Dhaqanka ayaa sheegay inay dhawaan Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan, kaga dhawaaqi doonaan Maamul ka madax banaan Dowladda federaalk ee Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay Caleemosaari doonaan Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble ka dibna ay dhisi doonaan Mamaulka ka badax banaan Dowladda Federaalka Soomaaliya. …
Ciidamo isku Hor Fadhiya Buulo Burde iyo Jahwareer ka taagan Xilwareejinta (Dhagayso)
June 13, 2016 – Waxaa weli cakiran Xaalada Degmada Buulobure ee Gobolka Hiiraan oo maanta lagu waday inay ka dhacdo xil wareejin, ayaa waxaa hadda isku horfadhiya Ciidamo kala taabacsan Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan iyo Gudoomiyaha Degmada Buuloburde. Nin kamid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in Magaalada oo dhan ay xirantahay oo …
Maamulkii Degmeda Buulo Burde oo Xil ka Qaadis Lagu Sameeyay
June 12, 2016 – Waxaa xilka qaadis lagu suubiyaya Guddoomiyihii Degmada Buulo burde C/casiis Duurow Maxamed iyo Duqii Degmadaasi Cismaan Geedi Raagge, kadib markii ay Digreeto ka soo baxday Xafiiska Wasaarada Arimaha Gudaha ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Sida uu Saxaafadda u sheegay Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdalla (Inji) waxaa xilkii laga …
Duqa Baledweyne oo Sheegay in 15 Qof ay Gaajo ugu Geeriyoodeen Magaalada (Dhagayso)
May 21, 2016 – Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa maanta warbaahinta u sheegay in Xaafadda Howlwadaag ee Galbeedka Magaalada Baledweyne ay Dad gaaraya 15 Ruux ay ugu geeriyoodeen gaajo kadib markii ay ku Go’doomeen Xaafadihii uu Dagaalka ka socday. Duqa Baledweyne Cumar Aadan Ibraahim ayaa sheegay in Xaafada Howlwadaag ay dad gaaraya ilaa 15 Qof ay …